Kulamadii Sabtidii & Axad Horyaalka English Premier League-ga (SAWIRO) – SBC
Kulankii 9-aad ee ka mid ah horyaalka English Premier League-ga ayaa la ciyaaray sabtidii iyo axadii kuwaasi oo xiiso badan lahaa, isla markaana ay kulmeen 20-ka kooxood ee sanadkan ka qayb qaadanaya horyaalka.
Shan kulan oo ay ku kulmeen 10 kooxood oo sabtidii la ciyaaray waxaa la dhaliyey 12 gool waxaase laba kulan oo kaliya oo Axadii la ciyaaray ay ka badnaayeen goolasha la dhaliyey kulamadii sabtidii oo dhan, taasi oo ka dhigtey in ciyaaraha Axada la ciyaaray ay xiiso badan lahaayeen maadama ay ku lug lahaayeen shan ka mid ah kooxaha xiligan ugu awooda badan Premier League-ga.
Kulamadii sabtadii 22 October 2011, waxaa ugu xiiso badnaa kulankii dhexmarey Liverpool & Norwich City oo sanadkan ku cusub Premier League-ga, waxaana kulankaasi oo ka dhacay guriga Liverpool ee Infield Stadium uu ku soo dhamaaday riwaayad yaab leh oo 1-1 la isla dhaafay balse la oran karo Liverpool waxaa diiday calafka goolasha halka Norwich ay leedahay haybad ay si adag ula dagaalantey kooxda ay martida u aheyd oo si aan caadi aheyn fursado badan isaga qasaariyey.
Craig Bellamy oo Liverpool sanadkan uga yimdi dhanka Man City ayaa siisay kooxda martida loo ahaa goolka hogaaminta qaybtii koowaad ee ciyaarta laakiin waxaa Liverpool u diidey sadexdii dhibcood ee kulankaasi loo cararay ciyaaryahanka Grant Holt oo ciyaartaasi ay u aheyd kulankiisii 100-aad ee uu u safto kooxda Norwich Cirt ka dib markii qaybtii dambe ee ciyaarta uu kubad madaxa ku qaaday uu ku hubsadey shabaqa Liverpool.
Goolhayaha kooxda Norwich City John Ruddy oo Isniinta beri ah u dabaaldegaya sanadguuradiisii 24-aad ee dhalashadiisa ayaa la oran karaa wuxuu ahaa badbaadiyaha shabaqa Norwich maadama uu tiro ka dhawr jeer uu badbaadiyey kubado si isdaba joog ah uga imaanayay weeraryahanada Liverpool oo uu ugu qatarsanaa Luis Suarez.
Bellamy (daqiiqadii 45+1)
Goolka Norwich City
Holt (Daqiiqadii 60-aad)
Kulankan oo ka dhacay Infeild Stadium waxaa ka soo qayb galey 44,931 oo daawade.
Kulamada kale ee Sabtidii
Newcastle United oo sanadkan ku socota jawi wanaagsan oo aan wali dhulka la dhigin dhinaceeda ayaa gurigeeda St. James’ Park, Newcastle waxay ku qaabishay kooxda Wigan Athletic 5 kulan oo hore laga soo badiyey.
Laakiin kulankii shaley Newcastle oo ay ku dhegan tahay ayaa ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 9 daqiiqo waxaa gool caabilo leh u saxiixay ciidamada Alan Pardew kubad sameeya khadka dhexe Yohan Cabaye.
Goolkaasi ayaa siiyey Newcastle 3-dii dhibcood ee kulanka waxaana uu noqonayaa kulankii 9-aad oo xiriir ah oo aan laga badin oo kala ah 4 barbardhac ah 5 badis ah.
Wigan ayaa la kulantey 6 kulan oo ka mid ah 9-ka kulan ee ay ciyaartey.
Cabaye (Daqiiqadii 81-aad)
Kulankan oo ka dhacay garoonka Newcastle ee St. James’ Park, Newcastle waxaa ka soo qayb galey 48,321 oo qof.
Wolves 2-2 Swansea City Garoonka Molineux, Wolverhampton ee Wolves
Aston Vill 1-2 West Bromwich garoonka Villa Park, Birmingham
Bolton 0-2 Sunderland garoonka Reebok Stadium, Bolton
Kulamadii Axadii 23 October 2011
Arsenal oo guul caaqibo ka gaartey kooxda Stoke City kaalinta 7-aadna cariirsatey
Yao Gervinho ayaa goolkiisii ugu horeeyey wuxuu ku hordhaliyey taageerayaasha oo ku sugan garoonka Emirates Stadium laakiin waxaa goolkaasi isla qaybtii hore barbardhac ka dhigay ciyaaryahankii hore ee kooxda Tottenham ee ay Arsenal xifaaltanku ka dhaxeeyo ee xagagii la soo dhaafay ku biirey Stoke City ee lagu magacaabo Peter Crouch.
Ciyaarta oo qaybtii labaad la isagu soo laabtey ayaa la ismari waayey, waxaana kooxda martida loo ahaa ee Arsenal macalinkoodu Arsene Wenger uu daqiiqadii 67-aad badal ku soo galiyey ciyaarta xidiga uu ku dhaarto xiligan Robin Van Persie oo kulankan loo fariisiyey nasiino iyadoo la ciyaarsiiyey kulanka weeraryahanka reer Moroco Marouane Chamesk, balse Arsenal oo raadinaysay guusheedii shanaad ee isku xigta ee Emirates Stadium ayaa badalkaasi ka faa’idey ka dib markii laba goo loo is xiga oo caaqibo leh uu si xarago leh u dhaliyey ciyaaryahan Van Persie.
Goolka Stoke ee barbardhaca ay ku keensatey qaybtii hore waxay ku raadinaysay dhibicdii ugu horeysay ee ay abid ku keento garoonka Emirates Staduim, balse waxaa meesha ka saaray rajadaasi Van Persei.
Stoke oo la aasaasay sanadkii 1863-dii waa ah kooxda ugu faca weyn kooxaha English Premier League waxay sidoo kale loo aqoonsan yahay kooxda labaad ee aduunka ugu faca weyn marka laga soo tago kooxda Notts Count oo ka mid ah xiligan ku jira heerka sadexaad ee dalka Ingiriiska.
Goolka labaad ee uu dhaliyey Van Persie ayaa ahaa kii 200-aad ee Premier Leugea-ga ee ay Arsenal ku dhaliso garoonkeeda Emirates Stadium.
Gervinho (Daqiiqadii 27-aad)
Van Persie (Daqiiqadihii 73-aad & 82-aad)
Goolka Stoke City
Crouch (Daqiiqadii 34-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Emirates Stadium waxaa soo xaadiray 59,671 qof
9 nin oo Chelsea oo mixnad ka qabsatey garoonka Loftus Road ee kooxda QPR
Ka dib markii laba ciyaartoy oo muhiim ah kaarka cas loo taagay kooxda Chelsea mixnad ayaa ka qabsatey garoonka Loftus Road ee kooxda ay dariska yihiin ee QPR.
Toban daqiiqo ciyaarta oo socota ayaa kooxda Queens Park Rangers (QPR) waxay heshay gool ku laad ama rigoore taasi oo uu u saxiixay weeraryahanka Heidar Helguson.
Laakiin goolkaasi xaajadu kuma ekaan ee Chelsea waxaa dhididka ka soo yaaciyey ka dib markii banaanka loo saaray oo kaarka casaanka loo taagay ciyaaryahanka daafaca Chelsea uga ciyaara Jose Bosingwa ee hooyadiis Congo u dhalatey kaasi oo noqonaya kaarkii casaa ee ugu horeeyey ee uu abid ku qaato Chelsea ama qarankiisa Portugal.
Bosingwa ayaa loo siiyey roosada ka dib markii isagoo ah qofka ugu dambeeya uu dhulka la galay weeraryahanka horey Chelsea ugu ciyaari jirey Shaun Wright-Phillips oo maalinimada Talaadada u dabaaldegaya sanadguuradiisii 24-aad ee dhalashadiisa.
Daqiiqadii 41-aad ee qaybtii hore ee ciyaarta Chelsea wacdaro kale ayaa qabsadey maroodiga Afrika Didier Drogba ayaa isagana kaarka cas loo taagey iyadoo ay tahay markii 10-aad ee guud ahaan kaarkaasi uu qaato intii uu ku jiray ciyaarta kubada cagta.
Drogba ayaa qalad ula kac ah oo wuxuu cirkaasi ula kacay Adel Taarabt taasi oo garsoorihii ciyaarta aanu wax shaki ka muujin in uu banaanka uga saaro ciyaarta weeraryahanka reer Ivory Coast.
Sidoo kale Chelsea waxaa ka qaaday kaarka hurdiga 7 ciyaartoy oo uu ka mid yahay captain John Teryy.
Weeraryahanka Chelsea Nicolas Anelka oo badal lagu soo galiyey iyo kubad qaabeeya khadka dhexe Frank Lampard oo kulankii maanta uu ahaa kiisii 500-aad ee Premier League uu safto ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuulay sidii ay uga heli lahaayeen dhibic bareejo ah kooxda QPR oo Chelsea oo ay kulmaan ay ugu dambeysay sanadkii 1995-kii.
QPR sadexda dhibcood ee ay ka qaatey Chelsea waxay noqonaysaa guushii ugu horeysay ee ay ku gaarto garoonkeeda Loftus Road tan iyo 4-tii bishii April ee sanadkan.
Helguson (Gool ku laad daqiiqadii 10-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Loftus Road ee QPR waxaa soo xaadiray 18,050 qof.
Halkan ka akhriso ciyaartii Man United & Man City
Fulham 1-3 Everton Garoonka Craven Cottage, London
Blakcburn Rovers 1-2 Tottenham Hotspur garoonka Ewood Park, Blackburn
Aguero Man City 9 gool
Rooney Man United 9 gool
Dzeko Man City 8 Gool
Van Perise Arsenal 7 Gool
Ba Newcastle 5 Gool
Apriil 4, 2012 at 8:09 am
xudun oo 5kaga badisay laascaanood